जिल्लामै पहिलो प्रहरी बिट उद्घाटन « Deshko News
जिल्लामै पहिलो प्रहरी बिट उद्घाटन
उदयपुर, पुस १६
उदयपुर जिल्लाकै पहिलो प्रहरी बीट शुक्रबार गाईघाटमा उद्घाटन भएको छ । स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरबाट स्थापना भएको प्रहरीबीटको प्रहरी नायव उपरिक्षक ओमबहादुर रानाले उद्घाटन गर्नुभयो ।
जिल्लाको बढ्दो शहरीकरण र त्यसबाट आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई मध्येनजर गर्दै सदरमुकाम गाईघाटदेखि प्रहरी बीटको स्थापना र विस्तार थालिएको डिएसपी रानाले बताउनुभयो ।
युगा नगरपालिका वडा नं. २ पुरानोगाईघाटस्थित पिजिचौकमा स्थापना गरिएको प्रहरी बीटलाई “प्रहरीबीट नं. १” तोकिएको छ । यसैगरी बजारक्षेत्रका पिपलचौक, आँखाहस्पिटल चौक, मूख्यचौक, बोक्से बरगाछिचौक लगायतका ठाउँमा पनि प्रहरी बीट विस्तार गर्दै लगिने भएको छ ।
बीट स्थापनाले प्रहरी सबैतिर छरिएर सतर्करुपमा रहने भएपछि गलत गतिविधिमाथि निगरानी बढ्ने र शान्ति, सुरक्षा कायम हुने विश्वास लिइएको छ । यहि कुरालाई बुझेर स्थानीय जनताले आफैले बीटघर निर्माण गरिदिएका हुन् ।
बीटघर स्थापनाले प्रहरीलाई घाम, पानी, हुरीबतासको बेला अर्काको घर, पसलतिर लुक्नु नपर्ने भएको छ । प्रगतिटोल विकास संस्था र पुरानो गाईघाट टोल विकास संस्थाको सहयोगमा निर्मित बीटघरका लागि जनताले घरघरबाट सकेको आर्थिक सहयोग जुटाएका थिए ।
शहरीकरणको बढ्दो दायरा र सुरक्षा चुनौतीहरुलाई मध्ये नजर गरी थालिएको प्रहरीबीट स्थापना र विस्तारको स्थानीय नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, स्थानीय जनताले स्वागत गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेत, मानवअधिकार सञ्जाल उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्का, नेता मणी पौडेल, युवा दुर्गानन्द चौधरी लगायतले मन्तब्य दिएका थिए ।